fanontaniana Lazao anay ny momba anao
2 taona 4 volana lasa izay #7 by Dariussssss
Noho izany, salama rehetra. No anarako, Davida sy ny vaovao aho Forum Moderator. Nihevitra aho fa ny fomba tsara indrindra-eny fanombohana asa sasany eto dia ny hanokatra ity lohahevitra ity, ary mba hitsena anao rehetra.
Lazao anay ny momba anao, na inona na inona araka ny eritreritrao no zava-dehibe.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: rikoooo, PADA52, ricbru, txrace
2 taona 4 volana lasa izay #14 by rikoooo
Tonga soa eto amin'ny Rikoooo ekipa,
I'am Erik ny mpamorona sy mpitantana ny Rikoooo.com.
Tena faly aho ny fananana anao aty, izany no Forum. ianao ny mpampiasa
Izaho hanao annouce ao amin'ny manaraka gazetinay amin'ny mailaka mba hilaza ny rehetra momba ity sehatra vaovao.
Happy sidina rehetra
2 taona 4 volana lasa izay #15 by andhar
Hi, no anarako Aan
Izaho fiaramanidina mafana fo avy any Indonezia
Tsara ny mihaona aminareo rehetra
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: rikoooo
2 taona 4 volana lasa izay - 2 taona 4 volana lasa izay #16 by Dariussssss
Misaotra anareo rehetra hatreto. Manantena hahita be, mainka lahatsoratra ary ny maro hafa ny asa atao eto amin'ny ho avy.
Fanovana farany: 2 taona 4 volana lasa izay Dariussssss.
2 taona 4 volana lasa izay #35 by FCAIR
Miarahaba rehetra no anarako Terry (FCAIR) misotro ronono aho USAF Crew Lehiben'ny. Vao liana amin'ny FSX sy SIM manidina rehefa afaka taona maro. Lehibe toerana vaovao, mahatahotra Downloads. Sambatra Flying ny rehetra
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: rikoooo, Gh0stRider203
2 taona 4 volana lasa izay - 2 taona 4 volana lasa izay #36 by viscount
Hi - aho John avy any atsimo ny UK. Ary efa misotro ronono, voalohany fiaramanidina simulator dia nihazakazaka tamin'ny ZX81, mavesa ny kasety, ka nahaforona ny B737 (tsara ny altimeter sy ny Así) mifanitsy amin'ny tena blocky sary manidina eo amin'ny andian-tsoratra A sy ny andian-tsoratra B mainty sy fotsy - ary raha nanao izany tsara ianao nahita ny "toerana manodidina", iray hafa antsoina hoe C. mainty blob Inspiring zavatra. Nanomboka teo aho dia nanana Flightsim rehetra izay Microsoft efa niteraka, handroso amin'ny alalan'ny isan-karazany ny solosaina avy amin'ny 8086 amin'ny alalan'ny 384, 486, Pentium, miampy vitsivitsy kokoa, ny ny amin'izao fotoana izao I7. I efa nahazo fahazoan-dalana amin'ny tsy miankina izay manana ora roa-jato amin'ny 152s sy PA28s - tsy misy intsony amin'izao fotoana izao noho ny vidim-manidina eto any Angletera. Ny zanako lahy ihany koa ny nampiasa ny Flightsims, nahazo ny bibikely, ary nianatra nanidina, ary ankehitriny, amin'ny 4000 ora eo ambany fehikibo amin'ny (tena) A319 / 320s fotsiny momba ny handeha noho ny Kapiteny ny tapakila. Nahita an'i Rickoooo ny freeware Nosy Canary toerana tsara tarehy, izay tena mahavariana - maro fisaorana ho izany. Lehibe ny mahita teny anglisy pejy toy ny velona na dia eo aza tsy mihoatra ny 50 kilaometatra avy any Frantsa ny fahatakarako ny fiteniny dia lavitra ny tsara.
Fanovana farany: 2 taona 4 volana lasa izay viscount.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: rikoooo, alogie
2 taona 4 volana lasa izay #37 by rikoooo
Miarahaba FCAIR sy viscount,
Misaotra anao noho ny famelabelaranao sy handray ny vaovao forum, isika dia tena mafana fo sy faly ny fananana anao aty, dia aza misalasala ny mandefa vaovao lohahevitra sy hangataka fanampiana amin'ny fiaraha-monina. koa, raha te-hanampy ny hafa dia ho lehibe, ny fahalalana dia tena tonga soa eto, ary izahay dia ho tia ny manana ny fomba-ny, manidina lesona, Tutorials sy ny sisa nalefa tao amin'ny forum. Fandraisana anjara rehetra dia ho sambatra ny fiaraha-monina.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: viscount, FCAIR
2 taona 4 volana lasa izay #39 by FCAIR
Tamin'izay fotoana izay dia tahaka be ny mpianatra tahaka ny hatramin'izay. Mety mandray ahy somary mba mahazo ny ins sy outs ny FSX Kanefa isaky afaka manampy olona aho Ho fahafinaretana lehibe ho ahy ny hanao izany.
Blue Skies rehetra ..
2 taona 4 volana lasa izay #44 by Dariussssss
Indray mandeha indray, Tonga soa eto amin'ny Rikooo.
2 taona 3 volana lasa izay #153 by PAYSON
Hiya ny, ny anarany atao hoe PAYSON lamba. I Efa mampiasa ordinatera simulators ho tena izao ny fotoana kelikely, niaraka niverina nampiasa ny dika mitovy ny Ubisoft Sturmovik IL2. Nifindra ho any 10 taona WarBirds (tena nanampy azy ireo amin'ny cockpit ny mpiady dia te hampiditra ao amin'ny lalao. Izaho koa nanao ny sasany peripherals milalao Ubisoft kokoa mandroso ady Sims. Nifindra tamin'ny tany ny 5 taona tany World ny fiara mifono vy, mbola milalao izany. (mahazo lafo) nampiasa FSX aho nandritra ny 8 na 9 taona no ho raiki-pitia ny endrika. aho mbola tafiditra amin'ny fantatro, ary mbola hitifitra-en-up in Ubisoft. ankehitriny fa Izaho nahita ny ianareo ry namana, fa lehibe ny manana be fifantenana ny fiaramanidina mba manidina.
Miverina ho amin'ny rahona matevina,
Fotoana mamorona pejy: 0.326 segondra